युवा सँग महालक्ष्मी लाईफ राष्ट्रिय बीमा जागरण अभियानका लागी दुई जिल्लामा समिति गठन – Insurance Khabar
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफको युवा सँग महालक्ष्मी लाईफ कार्यक्रम अन्तर्गत रौतहट र बारा जिल्लामा राष्ट्रिय बीमा जागरण जिल्ला समिति गठन गरेको छ । रौतहट जिल्लामा राजेश कुमार शाहको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय राष्ट्रिय बीमा जागरण जिल्ला समिति गठन भएको छ । असोज ९ गते रौतहटको दुर्गा भगवती गाउपालिका सामूदायिक भवनमा एक कार्यक्रम बीच राष्ट्रिय बीमा जागरण जिल्ला समितिको गठन गरिएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । शंभु सिहंको अध्यक्षतामा संचालन भएको कार्यक्रममा महालक्ष्मी लाईफका क्षेत्रिय प्रमुख दिगम्बर प्रसादले प्रशिक्षण दिएका थिए । बीमा जागरण राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रिय सदस्य रिषिकान्त गुप्ता , रामाशंकर प्रसाद यादव र गाउँपालिका वडा नं ३ का अध्यक्ष डि के झाले बीमा जागरणको महत्व बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
त्यसै गरी बारा जिल्लाको निजगढमा एजेन्सी म्यानेजर विनोद खरेलको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय बारा जिल्ला राष्ट्रिय बीमा जागरण समिति गठन गरिएको छ । नवगठित समितिको अग्रसरतामा गौरीशंकर क्याम्पस, निजगढमा आज बीमा जनजागरण तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । ४५ जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा क्याम्पसक प्र. अ. राम प्रसाद गौतमले मन्तव्य रखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका मार्केटिङ प्रमुख प्रशान्तराज धमला र एजेन्सी विभाग प्रमुख सिताराम धिमालले बीमाको महत्व र आवश्यकताको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।